Ukuphupha ngokudakumba Discover ➡ Discover Online Online ➡️
Ukuphelelwa lithemba, ukudimazeka, ukungabi nathemba-uxinzelelo sesinye sezifo zengqondo ezimbi kakhulu kwimbali. Nabani na onengxaki yokudakumba uhlala eziva edakumbile, eblue, edanile kwaye engenalo uluhlu, mhlawumbi evakalelwa kukuba abasakwazi ukumelana nobomi bemihla ngemihla. Kwimeko embi, umntu ekuthethwa ngaye ade acinge ngokuzibulala ngenxa yokuqhubeka nokungonwabi.
Oku kuhlala kunzima hayi kuphela kulowo ugulayo, kodwa nakwizihlobo zabo, izalamane, izihlobo, kunye nabantu abasebenza nabo. Nangona kunjalo, uxinzelelo alunakuchaphazela kuphela ubomi bokwenyani, lunokuphupha. Oku kunjalo ngakumbi kubantu abasempilweni ngokwenene. Kodwa kunokuthetha ukuthini ukubandezeleka ephupheni?
1 Uphawu lwephupha «Uxinzelelo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Uxinzelelo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Uxinzelelo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Uxinzelelo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uxinzelelo oziva ephupheni kunokuba luphawu lwexesha elizayo intlekele kubomi bokwenyani. Oku kunokugwetyelwa ngento yokuba ukuphupha kugqityiwe yinto ethile kwaye unoluvo lokuba imisebenzi ekufuneka uyifezile iyakukuthwalisa umthwalo ongaphezulu, kwaye uxanduva lwakho luyakhula phezu kwentloko yakho.
Ke ngoko, uphawu lunokuba ngu isicelo ukutshintsha into ebomini, ugqibe inqanaba elithile lobomi kwaye ke uzikhulule. Kubalulekile ukuba umntu afunde ukujongana nokusilela kwaye azenzele izigqibo. Ubomi obutsha kunye nolawulo ngakumbi bunokukunceda apha.
Uphawu lwephupha «Uxinzelelo» - ukutolikwa kwengqondo
Kuluntu lwethu kubonwa njengento engalunganga ukuba buthathaka kwaye ungazi ukuba ungaqhubeka njani. Kuhlala kufuneka ukubonisa idrive kunye namandla kwaye ujongane nemisebenzi eyahlukeneyo kunye nemisebenzi.
Kwangelo xesha linye, nangona kunjalo, kubalulekile ukuba abantu baqhubekeke neemvakalelo ezithile (ezimbi) kwaye bavunyelwe ukuba babuthathaka ngamanye amaxesha. Nangona kunjalo, kuba akukho ndawo yoku kubomi babantu bemihla ngemihla, abafuni ukubonakala besesichengeni, le nkqubo yenzeka emaphupheni.
Kwimeko yengqondo, uxinzelelo ephupheni luhlala luphawu lwe umthwalo onzimaiqela elinomdla alifuni okanye alinakho ukwabela. Ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ubone uphawu njengesimemo sokuvuma ngokwakho ukuba ngekhe wenze izinto ezithile kwakhona kwaye kufuneka uphumle.
Ngokoluvo lwabanye abasebenza ngengqondo, uxinzelelo ephupheni lunokuhamba kunye utshintsho bonisa ebomini bokwenyani. Ukuba umntu ekubhekiswa kuye ulithatha ngokungaphaya eli phupha, uya kuzenzela izigqibo aze aphelise inqanaba lobomi elidala kwaye enze ubomi bakhe bemihla ngemihla bulunge ngakumbi.
Uphawu lwephupha «Uxinzelelo» - ukutolika kokomoya
Ukudakumba ephupheni kubonisa inyathelo elibalulekileyo kuloo nto ngengqondo yokomoya indlela yobomi bokomoya ivuliwe. Ukuphupha kufuneka kuyekwe nezinto ezithile kukodwa, kunye "nomntu wakudala" wakhe ukuze uqhubeke.